9 Job wee zaa, sị: 2 “N’ezie, a maara m na ọ bụ otú ahụ ka ọ dị. Ma olee otú mmadụ efu ga-esi bụrụ onye ziri ezi ma ya na Chineke nwee okwu ikpe?+ 3 Ọ bụrụ na ọ dị ya ụtọ isesa mmadụ okwu,+ Mmadụ apụghị ịzaghachi ya otu ugboro n’ime otu puku. 4 O nwere obi amamihe, bụrụkwa onye dị ike.+ Ònye pụrụ imere ya isi ike, ihe agaziere ya?+ 5 Ọ na-ebupụ ugwu,+ ndị mmadụ adịghịkwa ama, Ọ bụ ya bụ onye kwatuworo ha n’iwe ya.+ 6 Ọ na-eme ka ala maa jijiji pụọ n’ọnọdụ ya, Ogidi+ ya ewee maa jijiji. 7 Ọ na-agwa anyanwụ ka ọ ghara ịcha, Ọ na-ekpuchikwa kpakpando ka a ghara ịhụ ha,+ 8 O ji aka ya setịa eluigwe,+ Na-ejekwa ije n’elu oké ebili mmiri nke oké osimiri;+ 9 O mere ìgwè kpakpando bụ́ Ash, ìgwè kpakpando bụ́ Kisịl, Tinyere ìgwè kpakpando bụ́ Kaịma+ nakwa ọnụ ụlọ ndị dị n’ime, n’ebe Ndịda; 10 Ọ na-eme oké ihe ndị a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha,+ Na ihe dị ebube a na-apụghị ịgụta ọnụ.+ 11 Lee! Ọ na-agafere m ma adịghị m ahụ ya, Ọ na-agafere ma adịghị m amata na ọ bụ ya.+ 12 Lee! Ọ na-anapụ ihe. Ònye pụrụ igbochi ya? Ònye pụrụ ịsị ya, ‘Gịnị ka ị na-eme?’+ 13 Chineke agaghị eme ka iwe ya dajụọ;+ Ndị na-enyere ihe na-eme ihe ike aka+ ga-ada n’ụkwụ ya, 14 Ma ya fọdụzie mgbe m sara ya okwu! M ga-ahọ okwu m ga-agwa ya ahọ,+ 15 Bụ́ onye m na-agaghị asa okwu, a sịgodị na m bụ onye ziri ezi.+ M ga-arịọ onye mụ na ya nwere ikpe arịrịọ.+ 16 Ọ bụrụ na mụ akpọọ ya, ọ̀ ga-aza m?+ Ekwetaghị m na ọ ga-ege ntị n’olu m; 17 Bụ́ onye ji oké ifufe mmiri na-emerụsị m ahụ́, Na-emekwa ka ọnyá m dị ọtụtụ n’enweghị ihe m mere.+ 18 Ọ gaghị ekwe ka m kuru ume ndụ,+ N’ihi na ọ na-eme ka ihe dị ilu zuo m ahụ́. 19 Ọ bụrụ na e nwere onye dị ike, ọ bụ ya;+ Ọ bụrụkwa na e nwere onye dị ike, nke na-ekpekwa ikpe ziri ezi, ọ ga-adị m mma ma ọ kpọọ m! 20 Ọ bụrụ na m bụ onye ziri ezi, ọnụ m ga-akpọ m onye ajọ omume; A si na mụ enweghị ihe a ga-eji taa m ụta, ọ ga-akpọ m onye aghụghọ. 21 A sị na mụ enweghị ihe a ga-eji taa m ụta, agaghị m ama mkpụrụ obi m; M ga-akpọ ndụ m asị. 22 E nwere otu ihe. Ọ bụ ya mere m ji asị, ‘Ọ na-ala ma onye na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta ma onye ajọ omume n’iyi.’+ 23 Ọ bụrụ na oké idei mmiri akpata ọnwụ mberede, Ọ ga-akwa obi nkoropụ nke ndị aka ha dị ọcha emo. 24 E nyefewo ụwa n’aka onye ajọ omume;+ Ọ na-ekpuchi ihu ndị ikpe ya. Ma ọ́ bụghị ya, ọ̀ bụzi onye? 25 Ụbọchị niile nke ndụ m efewokwa ọsọ karịa onye na-agba ọsọ;+ Ha agbaferewo, ọ dịghị ihe ọma ha ga-ahụ. 26 Ha agafewo dị ka ụgbọ epeepe e ji ahịhịa amị rụọ, Dị ka ugo nke na-efegharị na-achọ ihe ọ ga-eri.+ 27 A sị na m sịrị, ‘Ka m chefuo nchegbu m,+ Ka m kwụsị ịgbarụ ihu+ m ma gbasapụ ihu m,’ 28 Ụjọ ihe mgbu m niile na-atụ m;+ Amaara m na ị gaghị agụ m n’onye aka ya dị ọcha. 29 M ga-aghọ onye ọjọọ. Gịnị mere m ji na-adọgbu onwe m n’ọrụ n’efu?+ 30 Ọ bụrụ na mụ asaa ahụ́ ná mmiri snoo, Jirikwa ncha+ kwọọ aka m, 31 N’ime olulu ka ị ga-asụnye m, Uwe m ga-akpọkwa m asị. 32 N’ihi na ọ bụghị mmadụ+ dị ka mụ onwe m nke na m ga-asa ya okwu, Nke na anyị ga-ezukọ ka e kpeere anyị ikpe. 33 E nweghị onye ọ bụla ga-ebiri mụ na ya ikpe,+ Nke na ọ ga-ebikwasị anyị abụọ aka. 34 Ya wepụ ụtarị ya n’ahụ́ m,+ Ka ụjọ ya gharakwa imenye m egwu. 35 Ka m kwuo okwu n’atụghị ya egwu, N’ihi na adịghị m eme otú ahụ.